Dhalinyarada ay Puntland ku toogatay Gaalkacyo ma Al-Shabaab baa?. Xog Muhiim ah. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dhalinyarada ay Puntland ku toogatay Gaalkacyo ma Al-Shabaab baa?. Xog Muhiim ah.
On Jul 9, 2021 497 0
Waxaa isbuucyadii lasoo dhaafay aad loo hadal hayay wararka kasoo baxayay maamulka Puntland ugu magacaaban magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug kaas oo dhalinyaro ku laayay magaalada.
Maamulka Puntland ayaa ku tilmaamay dhalinyaradaas inay ahaayeen dagaalyahano Al-Shabaab ah oo ka hawgeli jiray magaalada Gaalkacyo isla markaana fuliyeen dilal loo gaystay masuuliyiin, Saraakiil, askar iyo shacab ku sugnaa magaalada Gaalkacyo sida ay hadalka u dhigeen. Dhalinyarada qaarkood ayaa waxaa lasii daayay muuqaallo hore looga sii duubay iyagoo qiranaya qaar kamid ah falalka la sheegay inay gaysteen.
Hadaba Shabakada Wararka SomaliMeMo ayaa u kuurgashay xogta hoose ee dhalinyaradaan lagu laayay Gaalkacyo. Waxaa ay la xiriirtay masuuliyiin ka tirsan Jihaazka Amiga Xarakada Al-Shabaab kaas oo ay Puntland sheegtay inay isaga ka tirsanaayeen xubnana ka ahaayeen.
Sarkaal sare oo ka tirsan Jihaazka Amniga Al-Shabaab qaybtiisa ka hawlgasha gobolka Mudug ayaa u xaqiijiyay SomaliMeMo in 21 qofood ee maalintii Axada taariikhduna ahayd 27 bishii lasoo dhaafay ee Juun 2021 lagu dilay Puntland aysan wax shaqa ah ku lahayn Xarakada Al-Shabaab.
“ Maamulka ridada ah ee isku magacaabay Puntland wuxuu dilay 21 qofood. 18 waxaa lagu dilay Gaalkacyo, halka 3 kalena lagu dilay meelo kale. Dadkaas la dilay dhamaantood wax xubinimo, xiriir ama shaqo ah lama aysan lahayn Mujaahidiinta.” Sidaas waxaa SomaliMeMo u sheegay sarkaalka ka tirsan Jihaazka Amniga Mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka hawlgala Mudug.
Sidoo kale dhamaan qaybaha kala duwan ee Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayuu sarkaalku sheegay inaysan jirin wax xiriir ah oo kala dhexeeyay raggaas maamulka Puntland uu ku laayay Magaalada Galkacyo iyo meelo kale.
SomaliMoMo waxay sidoo kale ogaatay in 8 dhalinyaro ah oo maalinkii shalay oo arbaco ahayd lagu xukumay dil toogasho ah laguna eedeeyay inay Al-Shabaab yihiin aysan wax shaqo, xiriir ama xubinimo ah lalahay Mujaahidiinta.
Sida ay sheegayaan xogo hoose oon ka helnay ilo-wareedyo lagu kalsoonyahay, waxaa jira dhalinyaro kale oo la doonayo in iyagana dilal toogasho ah lagu xukumo kuwaas oo ku jira gacanta maamulka Puntland.
Qorshahaan lagu xasuuqayo dadka dhalinyarada ah badankoodna kasoo jeeda Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa fikirkiisa iskaleh nin lagu magacaabo Cabdi Ladiif Muuse “Sanyare” kaas oo maamulka Puntland ugu magacaaban Gobolka Mudug. Qaqabashada dhalinyarada, jirdilkooda, duubista qiraallada xoogga looga keenay iyo dilkoodana waxaa qaabilsan Maleeshiyaat Maraykanku tababaray oo saldhig ku leh magaalada.
Arintaan ayaa sida aan ku ogaanay baaris dheer oon ku samaynay waxaa looga golleeyahay arrimo ay ka mid yihiin in lagu cabsi geliyo qabaa’ilka iyo dadka ku dhaqan deegaanada Puntland kuwaas oo uu maamulka Puntland dhawr jeer ku eedeeyay inay xiriiro la sameeyeen Al-Shabaab, qaar kamid ah odayaasha qabaa’ilka halkaas degana uu maamulku sheegay inay koonfurta Soomaaliya u safreen hishiisyana lasoo galeen Xarakada Al-Shabaab.
Qaar ka tirsan dhalinyarada la toogtay ayaa la sheegay inay ehelo dhow yihiin rag ka tirsan dad uu maamulku ku tuhmayo inay kamid yihiin odayaashii iyo ganacsatadii kasoo jeeday Puntland ee uu maamulku ku andacooday inay Al-Shabaab hishiis lasoo galeen.
Xogo kale oo muhiim ah ayaa sheegaya in gumaadka uu maamulka Puntland kula kacayo maxaabiista ku jira xabsiyadiisa ay tahay jawaab uu ka bixinayo weerarkii dhawaan Al-Shabaab ay ku qaadeen xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso halkaas oo ay Mujaahidiintu kasii daayeen 400 aa maxaabiis ah.
Xasuuqa uu Maamulka Puntland u geysanayo dadka shacabka ah ee aan wax xiriirka ah lalahayn Al-Shabaab ayaa hadal-hayn badan iyo dhiillo ka abuurtay guud ahaan geyiga Soomaaliyeed, gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya halkaas oo ay kasoo jeedaan inta badan dhalinyaradaas la beegsanayo.